Kardinaly Pietro Parolin : “ AZO IALANA NY FAHANTRANA…” -
AccueilRaharaham-pirenenaKardinaly Pietro Parolin : “ AZO IALANA NY FAHANTRANA…”
Tontosa omaly, teny Mahamasina ny sorona masina lehibe notanterahin’ny mpino katolika rehetra manerana ny Nosy, izay notarihin’ny Sekreteram-panjakan’ny fiketrehana masina ao Vatican, ny Kardinaly Pietro Parolin. Fotoam-pivavahana lehibe nentina nanamarihana ny jobily volamena fankalazana ny faha-50 taonan’ ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin’i Madagasikara sy Vatican. Ho fanomezam-boninahitra ity fotoan-dehibe ity dia tonga teny an-toerana ireo olo-manan-kanja eto amin’ny tany sy ny firenena, ka isan’izany ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady sy Praiminisitra lehiben’ny governemanta Solonandrasana Mahafaly Olivier mivady ary ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta. Ny fanatrehana ity fotoam-pivavahana ity izay mampiseho fa tena olon’ny fivavahana ny mpitondra fanjakana, misokatra amin’ny finoana rehetra ary matahotra an’Andriamanitra ihany koa. Raha tsiahivina mantsy, tsy vao izao fa efa fanaon’ny Filoha ny manatrika ny fotoam-pivavahana lehibe tahaka izao eny anivon’ireo fiangonana isan-tokony ary manampy azy ireny koa.
Marihina hatrany fa ity fankalazana ny faha-50 taonan’ ny fifandraisana eo amin’ny firenena malagasy sy vatican ity dia natao hanamafisana izany fifandraisana izany sy natao ihany koa hijerena paikady hampandrosoana ny fiangonana katolika eto Madagasikara. Fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny lafin’ny fiarahamonina sy sosialy hanampiana an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny fanomezana fitaovana. Aorian’izao, hirariana ny hisian’ny fiovana eto amin’ny firenena malagasy. Fa mba ahatongavana amin’izany anefa dia nanafatra ny mpiray tanindrazana ny kardinaly Pietro Parolin mba hitodika amin’Andriamanitra nandritra ny fitoriana ny teny natao satria amin’ny alalan’izay ihany no ahafahana miala amin’izao fahantrana lalina iainan’ny malagasy izao. “Azo ialana ny fahantrana. Ny fitodihana amin’Andriamanitra dia lalana iray amin’izany”, hoy izy. « Atrakao mandrakariva ny fijery ho amin’ny tendrombohitra nitenenan’i Jesoa. Amin’izay ianareo dia hiala amin’ny adin-tsaina ho an’ny amin’ny hasambarana sy fanantenana. Manan-karena vato sarobidy ny taninareo. Aza tehirizina ho toa ny vatosoa mangatsiaka fa aoka ianareo hanana azy tahaka ny tany lonaka fa ho hitanareo fa hiavosa ny vokatra”, hoy hatrany ny hafatra napetrany.
Nandritra ny famaranana ny lamesa dia nisaotra manokana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady ireo tompon’andraikitra teo amin’ny fiangonana katolika, noho ny fanomezana voninahitra ny fotoana. Na dia teo aza mantsy ireo andraikitra sy adidy lehibe hiantsorohan’izy mivady amin’ny fitantanana ny firenena, tsy nahasakana azy ireo naneho ny fitiavana sy firaisan-kina ary firaisan-tsaina niaraka tamin’ireo mpino katolika izany.